नेप्से अध्यक्ष र महाप्रबन्धक धितोपत्र बोर्डविरुद्ध खनिए भन्छन्–‘रेगुलेटरले कामै गर्न दिएन’
काठमाडौं : बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, ब्रोकरलाई उपत्यकाबाहिर पठाउनेलगायतका विषयमा जानकारी दिन मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेप्सेका अधिकारीले अधिकांश समय धितोपत्र बोर्डको कटाक्ष गर्नमा खर्च गरे ।
तपाईंहरू काम गर्न सक्नु हुन्न् धितोपत्र बोर्डलाई आरोप लगाइरहनु हुन्छ किन ? भनेर पत्रकारले प्रश्न सोध्न नपाउँदै नेप्से सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामजी रेग्मीले कड्किंदै भने, ‘रेगुलेटरले काम गर्न दिंदैन । नगरे किन नगरेको भन्छ अनि फेरि केही गर्न लाग्यो फेरि किन गरेको भन्छ । यस्तो पाराले कसरी काम हुन्छ ?’ उनले भने । पहिला काम गर्न दिए पो हुन्छ, कामै गर्न नदिइकन राम्रो र नराम्रो भनेर हुन्छ ? कामै नगरी नतिजा आउँछ ? उनको प्रतिप्रश्न थियो ।
उता, नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलिया पनि धितोपत्र बोर्डसँग निकै रुष्ट देखिन्थे । तपाईंहरूको धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्ध किन चिसिएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा थपलियाले भने, ‘संस्थागतरुपमा धितोपत्र बोर्डसँग हाम्रो कुनै पनि चिसोपना छैन । तर व्यक्तिगतरूपमा तिक्तता बढेको छ । बाहिर अनर्गल कुरा भएको सुनिएको छ । यस्ता कुरा व्यावसायिक हुन सक्दैन,’ उनले भने । बोर्डले काम गर्न नदिएको थपलियाको दाबी छ ।
यस्तै, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रेग्मीले अर्को एक प्रसंगमा पत्रकारसँग प्रतिप्रश्न गरे, ‘तपाईंहरूको छोरा बिग्रियो वा भनेको मानेन भने बोलाएर गाली गर्ने कि पत्रकारलाई भन्दै हिँड्ने ?’ उनको यो कटाक्ष धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीप्रति लक्षित थियो । नेप्से अधिकारीहरूले प्रस्टरूपमा भने हामी बजार सुधार गर्न चाहिरहेका छौं । तर यसमा धितोपत्र बोर्ड बाधक छ । सँगै उनीहरूले यो पनि भन्न चाहिँ बाँकी राखेनन्–‘धितोपत्र बोर्ड हाम्रो नियामक हो । नियामकले दिएको निर्देशन हामी अक्षरशः पालना गर्न तयार छौं । नियामकको निर्देशन पालना नगरे त कारवाही भइहाल्छ नि ।’